सरकारले समिटको निम्ति पैसा खर्च गरेको छ भने त्यसको छानबिन गर्नुपर्छ :: मन्त्री ज्वाला – Esancharpati
सरकारले समिटको निम्ति पैसा खर्च गरेको छ भने त्यसको छानबिन गर्नुपर्छ :: मन्त्री ज्वाला
काठमाडौं, १८ मंसिर । राजपा नेपालका शीर्ष नेता लक्ष्मणलाल कर्णले अबको चार दिनपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘अब यो सरकारलाई समर्थन जारी राख्नुपर्ने कुनै औचित्य छैन । हाम्रो पार्टीको अब बस्ने बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय लिन्छ ।’
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता कर्णले आफूहरुले सरकारमा जानको लागि यो सरकारलाई समर्थन नगरेको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘हामीले त संविधान संशोधन र आन्दोलनका बेला हाम्रा नेता तथा कार्यकर्तालाई लगाएको मुद्दा फिर्ता गराउनको लागि यो सरकारलाई समर्थन दिएको हो । तर, दुई वटै विषयमा अहिलेसम्म सरकारले हामीसँग कुनै छलफल नै गरेको छैन् । त्यसैले अब समर्थन कायम राख्नुपर्ने औचित्य छैन् ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले वर्तमान सरकार पूर्ण रुपमा असफल भैसकेको पनि आरोप लगाए । उनले भने,‘सरकारले कुनैपनि गतिलो काम गर्न सकेको छैन् । स्थानीय सरकारमा अहिले विकास रकमको चरम दुरुपयोग भएको छ । बास्तवमा भन्ने हो भने यो सरकारले राम्रो काम केहीपनि गर्न सकेको छैन् ।’ सरकारले मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन समेत कायम गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।
उनले भने,‘चार महिना अघि भएको निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या प्रकरण आजपनि चर्चित नै छ । यो कसको कमजोरी हो ? एउटा बच्च बलात्कृत हुन्छ, त्यसलाई मारिन्छ, र त्यसको दोषी को हो भन्ने पत्तै लाग्दैन् । अनि यो भन्दा निकम्मा सरकार अरु को होला ? यो देशमा यतिका प्रहरी छन् । सशस्त्र प्रहरी छन् । सेना छ । लाखौंको संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरु छन् । अझ नपुगेर भर्ना गरिँदैछ । के को लागि ? केवल मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई स्यालुट ठोक्नको लागि ?’ साँढे ३३ केजी सुन तस्करी प्रकरण अहिले सेलाएको भन्दै सरकारकै कारण यो प्रकरण सेलाएको उनको आरोप छ । उनले थपे,‘अहिले त जेलमा भएकाहरुपनि धमाधम छुट्दैछन् ।’
कर्णले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले क्रिश्चियन धर्म प्रचार गर्नको लागि नै योगदान पुर्याएको आरोप लगाए ।
उनले भने,‘यदि प्रधानमन्त्री वा अरुले बरु क्रिश्यिचन धर्म नै कबुल गरेको भए मलाई केही पनि भन्नु थिएन । तर, देशको सरकार प्रमुखले नै एउटा धर्मको निमित्त खर्च गर्ने र प्रचार गर्ने यो विल्कुल गलत काम भयो । व्यक्तिगत रुपमा केपी ओली क्रिश्चियन बन्न सक्नुहुन्छ । त्यो उहाँको व्यक्तिगत छुटको कुरा हो । तर, उहाँ अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्री हो । उहाँ प्रधानमन्त्री भईकन जुन एउटा धर्मको प्रचारमा लाग्नुभयो, यो विल्कुल गलत हो । यो हाम्रो संविधानको बर्खिलाप हो । संविधानले पनि यसलाई सहँदैन् । उहाँले जुन काम गर्नुभएको छ, त्यो विल्कुलै गलत काम हो ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री मीन विश्वकर्माले एशिया प्यासिफिक समिट आयोजनामा सरकारको संलग्नता हुनु नेपालको ईतिहाँसमा सबैभन्दा ठूलो दुर्घट्ना भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने,‘यो समिटको आयोजक संस्था र साझेदारी संस्थाप्रति हाम्रो सुरुदेखि नै असहमति थियो । अब त गम्भिर आपत्ति पनि छ ।’
नितान्त धार्मिक आईएनजिओले गरेको कार्यक्रम र त्यसमा पनि क्रिश्चियनहरुभित्रै विवादित संस्था भएकोले उक्त संस्थालाई आम क्रिश्चियनहरुले पनि नपत्याएको उल्लेख गर्दै उनले भने,‘यो संस्थाले अकुत सम्पत्ति कमाएको र कर छली गरेकोले यसका संस्थापक जेल परेका थिए । उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाबीच जासुसीको काम गरेकोले उनलाई प्रतिबन्ध लगाईएको थियो । यो संस्थाले धेरै पैसा उठाएको छ । यो पैसा कहाँबाट आउँछ ?’
संस्थाका प्रमुखलाई उत्तर कोरिया, जापान र बेलायत जान प्रतिबन्ध गरिएको बताउँदै उनले उनकै कान्छी श्रीमती मुनलाई नेपालमा ल्याएर आर्शिवाद लिनु गलत भएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘नेपालको ईतिहाँसमा यो राजनैतिक र कुटनैतिक रुपमा अर्को ठूलो भुकम्प हो । विश्वभरि नेपालबारे अब सबैभन्दा कमजोर दृष्टिकोण भएको सरकार हो भनेर मेसेज गएको छ । हाम्रो प्रधानमन्त्री त चार रात प्रधानमन्त्री निवास छोडेर होटेलमा गएर बस्नुभयो । अरु देशमा मन्त्रीहरुपनि नजाने कार्यक्रममा हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीले त निवास नै छोडेर जानुभयो ।’
नेपालका हिन्दूहरुमा धार्मिक सहिष्णुता भएरमात्रै केही अप्रिय घट्ना नभएको नत्र सम्मेलनका पाहुनाहरु सोल्टी होटेल छिर्न पनि पाउँदैन थिए भन्दै उनले सुनाए । उनले भने,‘हिन्दूहरुमा धार्मिक सहिष्णुता नभएको सम्मेलनका पाहुनाहरु होटलमा छिर्नपनि पाउँदैन थिए । न त छिरेका मान्छेहरु बाहिर नै आउन पाउँथे ।’ डेढ महिना अघि मुलुकका विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई घुँडा टेकाएर दशैंको टिका लगाईदिने अनि आज आएर तीनैले मुनसँग आर्शिवाद लिन आउन स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार प्रमुखहरुलाई पनि उर्दी जारी गर्नु हाँस्यस्पद भएको उनको टिप्पणी छ ।
अस्वस्थ भएर कार्यकर्तासमेत नभेटेका प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै एक धर्म विशेषलाई प्रचार गर्न यत्रो ठूलो सक्रियता देखाएको भन्दै उनले कडा आक्रोश पोखे । उनले भने,‘हाम्रो देशका स्वयम् प्रधानमन्त्रीले संविधानको सिमा नाघ्नुभयो र १२ हात उफ्रिएर संसारकै राष्ट्रपति हुन्छुजस्तो गरेर यसरी यो कार्यक्रममा लाग्नुभयो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भिर गल्ती गरेको भन्दै उनले आफूहरु अहिले नै उनको राजिनामा माग्ने पक्षमा नभएपनि प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम संसदमा सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘उहाँलाई सच्चिने समय छ । यस्तो विवादित कार्यक्रममा सरकारको संलग्नता हुनु आपत्तिजनक छ । हाम्रो यसप्रति सैद्धान्तिक रुपमा असहमति र घट्नाप्रति पूर्ण आपत्ति छ । प्रधानमन्त्रीको तहबाट क्रिश्चियन धर्मलाई उच्च सम्मान र हिन्दू धर्मलाई खिल्ली उडाउने काम भयो । उहाँले व्यक्तिगत रुपमा पाउनुहुन्छ । तर, सरकारको प्रमुख भएपछि यस्तो गलत काम गर्नुहुँदैन् । त्यो पनि राज्यकोषबाट पैसा खर्च गरेर ।’ आफूहरुले यसप्रति विधिसम्मत् ढंगले प्रतिवाद गर्ने पनि उनले जनाए ।
नेता विश्वकर्माले सरकारले नौटंकी र जोकर काम गरिरहेको पनि आरोप लगाए । निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या प्रकरण र ३३ केजी सुन प्रकरणलगायत हत्या, हिंसा र बलात्कारका घट्नामा सरकार पूर्ण रुपमा चुकेको पनि उनले आरोप लगाए । उनले भने,‘सरकार त अहिले अभियुक्त नजिक पुगिसकेपछि आँफै ब्याक हुन्छ । सरकारले अहिले आफ्नो मान्छेले चोरेको थाहा पाएपछि ‘खेद्नु तर नभेट्नु’ भनेजस्तो गरिरहेको छ । सरकार अहिले निर्मला पन्तको बलात्कारी खोज्दै खोज्दै जान्छ, फेरी आँफैकहाँ आईपुग्छ फुत्तै छोडिदिन्छ।’
देशलाई धार्मिक द्वन्द्वमा र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबाउने, हत्या, हिंसामा चुर्लुम्म डुबिसकेको प्रधानमन्त्रीको फोटो सबै खम्बामा राख्नुपर्ने अनि बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको न्याय माग्नको लागि उनको फोटो किन राख्न नपाउने ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । उनले भने,‘यो सरकार आँफै हत्या, हिंसा, बलात्कार र अपराध, तस्करी, भ्रष्टाचार हुँदाहुँदै अब धार्मिक द्वन्द्वको पनि नाईके हुन थाल्यो।’ सरकारका गतिविधिप्रति आफ्नो पार्टीको गम्भिर भत्र्सना रहेको उनको भनाई छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले वर्तमान सरकारले आफ्नो प्रत्यक्ष सहमति, संलग्नता तथा परोक्ष संरक्षणमा क्रिश्चियन धर्म विशेषको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘हाम्रो पार्टी सरकारको यो कदमप्रति गम्भिर आपत्ति जनाउँदछ ।’ सरकारको यो कदमले मुलुकमा डरलाग्दो सांस्कृतिक द्वन्द्वको उत्पत्ति हुने खतरा रहेको पनि अध्यक्ष राणाले औंल्याए ।
आफूहरु धर्मनिरपेक्षताको विराधी भएको सुनाउँदै उनले भने,‘जब यो राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरियो, तब यो मुलुकको मौलिक परिचय नै मेटियो । हामीले संविधान पारित हुने बखतपनि धर्मनिरपेक्षताप्रति गम्भिर असन्तुष्टि र असहमति दर्ज गराएका थियौं ।’
अहिले सरकारले जुन ढंगबाट क्रिश्चियन धर्मको कुरालाई लिएर अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्यो त्यो गलत भएको उनको टिप्पणी छ । राणाले थपे,‘धर्मनिरपेक्षतालाई मान्ने पार्टी चाहे त्यसका नेता माधव नेपाल हुन् वा चाहे त्यो हालको प्रधानमन्त्री होस्, उहाँहरु धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा आफ्नो विचार स्पष्ट गरेका व्यक्ति हुन् । तर, अस्तिको एशिया प्यासिफिक समिटको नाममा जुन ढंगबाट एउटा धर्मको (क्रिश्चियन धर्म)को पक्षमा उहाँहरु अगाडि सर्नुभयो । सरकारको साधन, स्रोतलाई दुरुपयोग गरेर यसको पक्षमा प्रयोग गर्नुभयो । यो उहाँहरुले नै भनेको कुराको ठीक उल्टो गरेको छ ।’
माधव नेपाल र ओलीको कदम धर्मनिरपेक्षताविरोधी कदम भएको अध्यक्ष राणाको गम्भिर आरोप छ । उनले भने,‘यो साम्यवाद विरोधी कदम हो । साम्यवादले कुनै एक धर्मलाई प्रचार गर्न दिँदैन् । यो सबै हुँदाहुँदै पनि किन यस्तो भैरहेको छ ? कतै यो मुलुकलाई अर्कै दिशामा लैजाने षड्यन्त्र त भएको छैन ? यो मुलुकलाई धार्मिक र सांस्कृतिक कसै अरु पक्षको उपनिवेश बनाउने षड्यन्त्रमा सरकार औजार भएर निस्केको त छैन भन्ने हामीलाई शंका लागेको छ ।’
नेपाललाई बाहिरको धार्मिक र सांस्कृतिक उपनिवेश बनाउने षड्यन्त्रको औजार सरकार बन्न नहुने उनको भनाई छ । यदि त्यस्तो षड्यन्त्र भयो भने आफ्नो पार्टी त्यसको सशक्त विरोधीमा उत्रिने पनि राणाले चेतावनी दिए ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले एशिया प्यासिफिक समिट विशुद्ध धार्मिक कार्यक्रम नभएको जिकिर गरेका छन् । उनले भने,‘यो समिट विशुद्ध धार्मिक कार्यक्रम होईनजस्तो मलाई लाग्छ । भाजपाका नेता विजय जोली आएर लामो भाषण दिएर सबैलाई प्रभावित पारेर फर्किएका छन् । लोकतन्त्रवादी नेतृ आङ साङ सुकी पनि आएकी छिन् । कार्यक्रमको प्रस्तुती हेर्दा यसले धर्म प्रचारको सन्देश गएको मलाई लाग्दैन् ।’
आफूले पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुँदा उक्त संस्थाबाट भ्रमणको निम्तो आउँदा संस्थाको बारेमा प्रष्ट नभएकोले भ्रमण प्रस्ताव अस्विकार गरेको उनले सुनाए । उनले भने,‘यो दोहोरो चरित्र कसैलेपनि देखाउन हुँदैन् । बरु बेठीक कुरा छ भने यथार्थ धरातलमा बसेर त्यसको छलफल गरौं । आज केपी ओलीले पाएको पुस्कार हिजो गिरिजा प्रसाद कोइरालाले पनि ग्रहण गर्नुभएको थियो । अब त्यसको रिभ्यु गर्नुपर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले पनि गर्नुपर्यो नि त । बैठक गर्नुपर्यो । हिजो गल्ती भएको रैछ भनेर कान समात्नुपर्यो ।’
अहिले चर्को स्वरमा विरोध गर्ने नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरु त्यही संस्थाको यस्तै खालका कार्यक्रमहरुमा अमेरिका, फिजीलगायतका देशहरुमा गएका उदाहरणहरुपनि प्रशस्तै रहेको उनले सुनाए । उनले थपे,‘आफू चाहीँ त्यही संस्थाको यस्तै स्वरुपको कार्यक्रममा सहभागी हुने, अनि यसकोमात्रै विरोध चाहीँ किन ? यसको अर्थ यो कार्यक्रमको मैले बचाउ गर्न खोजेको होईन् । मैले भन्न खोजेको के हो भने कसैले पनि दोहोरो चरित्र देखाउनुहुँदैन् ।’ सरकारले यो समिटको निम्ति पैसा खर्च गरेको छ भने त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
मन्त्री ज्वालाले भने,‘कुनै संस्थाको कार्यक्रममा सरकारले खर्च गर्न हुँदैन र पाउँदैन् । यदि खर्च गरेको छ भने त्यसको बारेमा छानबिन गर्नुपर्छ । अब प्रधानमन्त्रीलाई पुरस्कार दिएको छ । त्यो पुरस्कार प्रधानमन्त्रीले बालबालिकाको निम्ति खर्च गर्छु भन्नुभएको छ । यो संस्था हिजोदेखि नै क्रियाशिल थियो । हाम्रो देशमा मात्रै होईन, विश्वका अन्य देशहरुमा पनि क्रियाशिल छ । धेरै क्रियाकलापहरु भैरहेका छन् । विभिन्न कार्यक्रममा विभिन्न मान्छेहरु सहभागी हुँदै आएका छन् । यसको समग्र छानबिन हुनुपर्छ ।’
बलात्कारका घट्ना, बालक अपहरणपछि हत्या भएको घट्नाप्रति आफूहरु संवेदनशील रहेको उनले सुनाए । उनले भने,‘अपराधी पत्ता लगाउने, दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरामा सरकारले छानबिन गर्न कुनै कमी गर्नुहुँदैन् । यदि कमी भएको छ भने सरकारले त्यसलाई सधार्नुपर्छ । निर्मला पन्तको बलात्कारी होस वा बालक अपहरणपछि हत्या गरिएका अपराधी जोसुकै हुन्, कसैलाई पनि छुट दिनुहुँदैन् ।’
निर्मला पन्त प्रकरणको छानबिन अब निर्मम ढंगले गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने,‘सरकारको तर्फबाट कहीँ कतै कमी भएको छ भने अब कुनै कञ्जुस्याँई नगरेर सम्पूर्ण संयन्त्र र शक्ति प्रयोग गरेर अनुशन्धान हुनुपर्छ । कारबाही हुनुपर्छ । ढिलै भएपनि साँच्चिकै बलात्कारी, अपराधी र हत्याराहरु छुट्नुहुँदैन् ।’
उनले पुँजीगत खर्च कम हुनु नेपालकै ठूलो समस्या भएको सुनाउँदै उनले कर्णाली प्रदेशमा पनि यही रोग रहेको जिकिर गरे । उनले भने,कर्णाली मात्रै होईन, जुनसुकै सरकारको कुरा गर्दापनि पुँजीगत खर्च जुन अनुपातमा हुनुपर्दथ्यो, त्यो अत्यन्तै कम छ । मैले मेरो प्रदेशमा असारमामात्रै खर्च गर्ने कुरालाई बन्द गरिसकेको छु । बजेट भाषणमै जेठ मसान्तसम्म सम्पूर्ण विकास निर्माणको काम बन्द हुन्छ । असारमा कर्णालीमा काम हुँदैन् ।’
उनले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार, संरचना र कर्मचारी उपलब्ध नगराएको भन्दै गुनासो पोखे । यद्धपी उनले कर्णाली प्रदेशले छिट्टै केही प्राविधिक कर्मचारीहरु आँफै भर्ना गैरहेको पनि जानकारी दिए । उनले भने,‘प्रत्येक मन्त्रालयमा ६, ७ जनाको दरले हामी कर्मचारी भर्ना गर्छौं ।’
Strange Short article Uncovers the Misleading Measures of Publishing Essay British
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काले दिए राजीनामा
विप्लवमाथि लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउ:बहिर्गमित जनमुक्ति सेना,
८ भदौंमा ‘फ्राइडे नाइट विथ कलाकार’